Ny rahavavin'i Haim dia mangataka mpamokatra sarimihetsika amin'ny alàlan'ny Twitter ho an'ny anjara asany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny zazalahy very
Home Vaovao momba ny fialamboly Ny rahavavin'i Haim dia mangataka mpamokatra sarimihetsika amin'ny alàlan'ny Twitter ho an'ny anjara asany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny zazalahy very
Ny fahatongavan'ny nofo vao haingana ny sarimihetsika vampira taompolo 80-an dia eo am-pamokarana mialoha. Ary ny rahavavavavin'i Corey Haim dia te hanome voninahitra azy amin'ny filalaovana an'i Lucy.
by Timothy Rawles Septambra 22, 2021
by Timothy Rawles Septambra 22, 2021 1,728 hevitra
Telopolo taona mahery lasa izay taorian'ny horonantsary tara nataon'i Joel Schumacher Ilay zazalahy very namely ny efijery lehibe. Tamin'ny 1987; fotoan'ny volo lehibe, effets pratique ary solo solo. Ilay zazalahy very nanana ireo zavatra rehetra ireo, ao anatin'izany ny mpilalao sarimihetsika Corey Haim. Enina ambin'ny folo tamin'io fotoana io, Haim, miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy Corey Feldman mpiara-miasa matetika dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika be karama indrindra miasa any Hollywood. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny The Lost Boys, Haim dia nanamafy ny toerany fa tsy mpankafy fo fotsiny fa endrika mpiorina amin'ny fivavahana.
Taorian'ny nahavoa ny boaty kely nataon'ny boxe kely dia niverina tamin'ny asany Sam indray i Haim Zazalahy very: ny foko ho an'ny gadona kely tamin'ny taona 2008. Na dia mpijery na mpitsikera aza no niresaka an'ity tohiny ity dia zava-dehibe manokana ny fiverenan'i Haim ary na teo aza ny tsy fankafizany azy dia nahatanteraka ny adidiny hanome voninahitra ilay mpilalao sarimihetsika 37 taona tamin'io fotoana io ilay sarimihetsika. Tamin'ny 2010 mbola tohiny faharoa Ankizilahy very: The hetaheta navoaka tamina horonantsary niaraka tamina filalaovana kely fotsiny.
Mampalahelo fa tamin'ny martsa 2010, taorian'ny ady tamin'ny pnemonia, dia maty i Haim tamin'ny faha-38 taonany. Saingy mitohy ny lovany.
Fanandramana tsy nahomby tamin'ny famerenana efijery kely an'ny Ilay zazalahy very nosedished tamin'ny 2019.
Saingy, vao tsy ela akory izay no nanambarana fa misy iray hafa reboot of Ilay zazalahy very dia eo am-pamokarana. Amin'ity indray mitoraka ity dia ahitana an'i Noa Jupe ireo kintana tanora (A Toerana mangina) sy Jaeden Martell (IT). Tsy mbola misy resaka na tsia Corey Feldman dia ho ampahany amin'io tetikasa io.
Saingy, misy ny mety mety hanajana an'i Haim - farafaharatsiny raha misy ifandraisany amin'izany ny rahavaviny. Tao amin'ny lahatsoratr'i Twitter, Cari Haim, zokiny vavy an'i Corey, dia nanao fangatahana ho an'ireo mpankafy sy talen'ny filatsahana mba hanome azy anjara andraikitra amin'ny horonantsary vaovao.
Nanoratra ny mpilalao sarimihetsika:
“Hey, tsy faly ireo mpankafy amin'ny famerenana amin'ny laoniny #lostboys. Ahoana no tsy ahafahany manana #coreyhaim? Manana vahaolana aho! Amin'ny maha rahavaviny ahy, vonona aho hitondra ny angovo #haim amin'ity sarimihetsika ity. Mila an'i Neny [Noa Jupe] sy [Jaeden Martell], sa tsy izany? Ary ahoana izany? ” Avy eo nanome marika ny mpamokatra ilay horonantsary izy avy eo Brian Kavanaugh Jones sy ny talen'ny, Jonathan Entwistle.
Ny fanohanana ny fampiakarana azy dia tsara. Ny afisy sasany ao amin'ny Twitter dia somary mangidy amin'ny famerenanana ilay vampira ho kilasika, saingy tohano i Haim amin'ny fikasana handray anjara amin'izany.
Hey, mpankafy tsy faly amin'ny #lostboys avereno. Ahoana no tsy hananany #coreyhaim? Manana vahaolana aho! Amin'ny maha-rahavaviny dia vonona ny hitondra ny #haim angovo amin'ity sarimihetsika ity. #noahjupe ary@jaedenmartellmila reny marina? Ahoana izany,@BKavanaughJonesâ © â ¦@jonaent? pic.twitter.com/PI5LSJCX3c
- Cari Haim (@Cariteacher) Septambra 19, 2021
“Tokony hataonao tanteraka izany!” nanoratra Finoana. “Fanomezana mahafinaritra an'i Corey izany. Tsy hitovy izany raha tsy eo izy. Malahelo azy aho."
“Tena tsara tokoa ity raha jerena!” hoy i Hailey. ”Tsy zazalahy very tsy misy Haim io.”
Nilaza i Haim fa raha mbola miverina ao anaty karatra ny famerenana amin'ny laoniny, dia ho fanomezam-boninahitra lehibe ho an'ny anadahiny efa nodimandry ny fandefasana azy. Mbola mijanona eo akaikin'ny kilasika ihany izy saingy manantena ny hitondra sary vaovao ho azy ireo mpanao sarimihetsika ao ambadik'ity tetikasa vaovao ity.
Tamin'ny voalohany, dia Dianne Wiest iza no nilalao an'i Lucy; Reny very saina i Haim.
Tsy mbola misy teny hoe rahoviana Ilay zazalahy very hanomboka ny sary fototra na ny daty famoahana. Ary raha mbola misy ny fandefasana casting dia mety hahazo ny faniriany i Cari Haim.